Subas Niraula – Experimantal Site of Subas Niraula
by Subas Niraula July 2, 2019
written by Subas Niraula
न्यूज फिडलाई पर्सनलाइज्ड गर्नुहोस्ः यसको सहायताले तपाइँले आखिर किन तपाइँको फेसबुकमा कुनै खास प्रकारका पोष्टहरु मात्र धेरै देखिन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । फेसबुकले यस्ता पोष्ट कम गर्नका लागि केही शर्टकट्स दिएको हुन्छ । त्यसको प्रयोग गरी प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताले आफ्नो न्यूजफिडलाई आफ्नो मनपर्ने पोस्टका लागि पर्सनलाइज्ड गर्न सक्दछन् ।
फेसबुक डाटा म्यानेज गर्नुहोस् : यो नयाँ प्राइभेसी शर्टकटमा प्रयोगकर्तालाई एउटा मेन्यू प्राप्त हुन्छ । त्यहाँ ट्याप गरी प्रयोगकर्ताले आफ्नो डाटा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । साथै नयाँ शर्टकटले प्रयोगकर्ताको डाटालाई कसरी कन्ट्रोल गर्दछ भन्ने कुरा पनि फेसबुकले जानकारी दिन्छ । फेसबुकमा प्रयोगकर्ताले अग्रीम रुपमा कन्ट्रोल अप्सन प्राप्त गर्न थालेका छन् । जहाँ प्रयोगकर्ताले फेसबुकले कसरी र कहाँ आफ्नो डाटाको प्रयोग गर्न पाउँदछ भन्ने कुरा तय गर्न सक्दछन् । प्रयोगकर्ताले आफ्नो लोकेसन डाटालाई म्यानेज गर्नुका साथै फेसबुकमा अपलोड हुने सामाग्रीहरु, फेस रिकग्नीसन सेटिंग, तथा एड प्रेफरेन्स जस्ता विषय पनि म्यानेज गर्न सक्दछन् ।
लगइनका लागि टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन : फेसबुकले प्रयोगकर्ताका लागि एक विशेष खालको सेक्योरिटी फिचर ल्याएको छ, जसबाट तपाइँले पासवर्डका अलावा पनि फेसबुकको अकाउन्टलाई अझै सुरक्षित बनाउन सक्नुहुनछ । यो फिचर भनेको टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हो । उक्त फिचर एक्टिभेट गरेसँगै तपाइँले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा लगइन गर्दा आफ्नो मोबाइल वा इमेलमा आउने लगइन कोडको प्रयोग गर्नै पर्दछ । यसो गर्दा अरु मानिसले तपाइँको फेसबुकको पासवर्ड थाहा पाएपनि लगइन गर्न सक्दैन ।
एप्सका डाटा सिमिति गर्ने : यस फिचरबाट फेसबुकले अन्य एप्सद्वारा रिक्वेस्ट गरिने डाटालाई कम गर्ने कोसिस गरेको छ । यो एप्स अहिले केवल प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल फोटो, नाम तथा इमेल एड्रेसलाई मात्र एक्सेस गर्न सक्दछ । यसका अलावा अरु जानकारीका लागि पहिले सम्बन्धित फेसबुक प्रयोगकर्ताको अनुमति लिनु पर्दछ ।
ग्रुप बेस्ड कम्युनिकेसन:फेसबुकले हालै आफ्नो मोबाइल तथा डेस्कटप एपमा ग्रुप बेस्ड कम्युनिकेसनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि केही परिवर्तन ल्याएको छ । एपको केन्द्रमा माथिल्लो भागमा एउटा ग्रुप ट्याबको अप्सन छ । त्यसको सहयोगले ग्रुपको सामाग्री तपाइँको न्यूज फिडमा पहिले भन्दा धेरै देखिनेछ । साथै फेसबुक प्रयोगकर्तालाई नयाँ ग्रुप खोज्न तथा त्यसमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सुझाव दिन्छ ।
सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै ह्याक भएका वा सर्वाधिक कमजोर पासवर्डको खुलासा भएको छ । वर्षको सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको सूचिमा १२३४५६ सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । १२३४५ सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको पहिलो…
हामीले नयाँ वाइफाइ राउटर किन्दा कहिले पनि शक्तिशाली नेटवर्क सुरक्षाबारे ध्यान दिँदैनौं । खासगरी घरमा जोड्ने राउटर भनेपछि हामी केवल त्यसको स्पिड र कभर गर्ने एरियाका बारेमात्रै ध्यान दिन्छौं ।अब भने हामीले…
by Subas Niraula November 24, 2018
पछिल्लो समय मोबाईल फोनले घडि, क्यामरा, रेडियो लगायतका काम गर्ने भएको छ । धेरैको दिनभरकिो सहारा बन्दै आएको छ मोबाईल सेट । तर, धेरै जसो स्मार्टफोनका प्रयोगकर्ताहरु ब्याट्री नटिक्ने…
by Subas Niraula October 20, 2018
तपार्इं हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोन कुनैपनि बेला तात्न सक्दछ । प्रयोग गर्दागर्दै स्मार्टफोन तातेको बेला के गर्नुहुन्छ ? फोन चलाउन छाडेर गोजीमा राख्ने, कानबाट हटाउने, गोजीबाट निकाल्ने आदि आदि ।…
by Subas Niraula June 11, 2018
हामीले दिनहु आफ्नो दैनिकी पुरा गर्न को लागि एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँ मा जनको लागि नभई नहुने साधन हो सवारी साधन . त्यसमाथि पनि मोटरसाइकल त अग्रपंति मा आउछ…
आफ्नो ल्यापटप दैनिक प्रयोग गर्दा बढी तात्न सक्छ । तातेको ल्यापटपलाई उचित हेरचाह र संरक्षण गर्न सकिएन भने चाँडै बिग्रिन पनि सक्छ । बढ्दो गर्मीसँगै ल्यापटप बढी तातिने समस्या आउन…
Mobile, Our 6th sense. We all need it every time and everywhere. Unfortunately, sometimes our phone got wet accidentally and if we didn’t care it will be damaged. Here are…
by Subas Niraula April 21, 2018
In this time, If you areablogger or YouTuber or developer or whatever, we all want to have at leastawebsite. The globally famous website extensions are .com/…
by Subas Niraula April 13, 2018
तपार्इं हामीमध्ये धेरैले तौल घटनाउने अनेक प्रयत्न गरेका छौं । यस क्रममा धेरै मुल्य पनि चुकाएका छौं । तर, तौल बढाउने अभियानमा कति सफल भयौं तर तौल घटाएर हामी कति…